हेप्पी टोपी दिवस!
आमाले सोधिन्, हैन के उपद्रो गरेर बसेका छौ हँ ? किस्नेले बेलीबिस्तार लगाउन थाल्यो- आज ढाका टोपी दिवस । हामीले हाम्रो संस्कृति जोगाउनु पर्छ ।
भद्रगोल शर्मा | Published on 2017-01-04 |
किस्ने चट्ट ढाका टोपीमा ठाँटिएर हिँडेको देखेपछि तल्लाघरे साइँली आमै दङ्ग परिन् । सोधिन्, सधैँ मलामी जाँदामात्रै टोपी लाउने गामभरिका केटा आज किन ढाका टोपी लाएर हिँडेका हुन् ?
तिमी बुढीलाई के था' आज टोपी दिवस हो । आफ्नो संस्कृति जोगाउनु परेन ?, किस्ने च्याँट्ठियो ।
आमैपनि के कम, जवाफ दिइहालिन्- तिमी लाठेहरुले वर्षमा एकदिन टोपी लाउँदैमा संस्कृति जोगिन्छ ? सारा संस्कृति, धर्म-कर्म, रिति-थिति पोलेर खाने तिमेरु नै हैनौ ? जनै लाउनु छैन । टुप्पी पाल्नु छैन । सप्पै विदेशीका तालमा उर्लिएर हिँडेका छन्...
किस्ने नाजवाफ भएर ओरालो लाग्यो ।
उमेश र उसकी बहिनी उमा आँगनमा यौटा टोपी खोसाखोस गरिरहेका थिए । किस्ने जिल्लियो । के गर्दछौ हँ ? के को खोसाखोस हो ? उसले प्रश्न सोध्नासाथ उमेशले स्पष्टीकरण पेश गर्‍यो, बा'को टोपी लाएर सेल्फी खिचुँ भन्या । यसलाई नयाँचाहिँ चाहियो रे । यति सुन्नासाथ उसले कुरो बुझिहाल्यो । किस्नेले बहिनी सानी भएकीले नयाँ टोपी रोज्नु ठीक भएको तर्क गर्‍यो र दाजुबहिनीको टोपीको मामला मिलाईदियो । उमेश पनि त्यो कुरामा सहमत भयो । तीनैजना टोपीवाला सेल्फी खिचेर फेसबुकमा राख्ने निचोडमा पुगे । सोही बमोजिम उमेशले सेल्फी फेसबुकमा अपलोड गर्न थाल्यो ।
यत्तिकैमा उमाको मोबाइलमा गीताको स्टाटसको नोटिफिकेसन आयो । गीताको स्टाटसको मजबुन यस्तो थियो, 'यस्ता छन् नेता । यिनले जे कुरामा पनि हुँडलो मच्चाउन खोज्छन् । सांस्कृतिक क्रान्ति गर्छु भनेर हिँड्नेले ढाका टोपी देखी नसहने के भएको हो ? #बीआरबी' सधैँ भलाद्‌मी पारामा स्टाटस लेख्ने गीताले यसपालि खरो टिप्पणी गरेकी थिई । उमाले गीताको स्टाटस पढेर सुनाई । उमेशले गीताले टिप्पणी गरेको ट्विटको बारेमा जान्न चाह्यो । उमाले त्यो पनि सुनाइदिई ।
'एकल संस्कृतिका कुरा कति जायज़?' भन्ने प्रश्न सुनेपछि किस्ने जङ्गियो, बहुसंस्कृति हुनका लागि हरेकको एकल संस्कृतिको समान मुल्य र महत्व हुनुपर्छ । नेताजीले घुमाइ-फिराइ अंग्रेजी नयाँवर्षको समर्थन गरेको होला । यस्ता त नेता... हाम्रो संस्कृति हामीले जोगाउने हो । ढाका टोपी नेपालीको पहिचान हो । नयाँ वर्षसँग हामीलाई के मतलब । किस्नेका कुरामा दाजुबहिनीले हो मा हो मिलाए ।
हाम्रो संस्कृति हामीले जोगाउने हो । ढाका टोपी नेपालीको पहिचान हो । नयाँ वर्षसँग हामीलाई के मतलब । किस्नेका कुरामा दाजुबहिनीले हो मा हो मिलाए ।
तीनजनाको ढाका टोपीवाला सेल्फी फेसबुकमा पोस्ट भयो । धमाधम लाइक र कमेन्ट आउन थाले । यत्तिकैमा उमेशकी आमा घाँसको भारी बोकेर आँगनमा आइपुगिन् । टोपी दिवसको धुनमा मख्ख परेका उमा, उमेश र किस्नेलाई देख्नेबित्तिकै आमाले सोधिन्, हैन के उपद्रो गरेर बसेका छौ हँ ? किस्नेले बेलीबिस्तार लगाउन थाल्यो- आज ढाका टोपी दिवस । हामीले हाम्रो संस्कृति जोगाउनु पर्छ । अरुको नयाँ वर्ष मनाउने हैन । इत्यादि ।
कसको नयाँ वर्ष रे ?
विदेशीको । अङ्ग्रेजीको ।
अनि के भो त ? अरुले नयाँ वर्ष मना'को रिसले तिमेरु टोपी लाएर हिँडेका ? बुद्धिले अरु खा, रिसले आफु खा ।
ढाका टोपी र भादगाउँलेको भेउ नपाउने तिमी ठेट्नाले गर्छौ संस्कृतिको संरक्षण । शिरदेखि पाउसम्म आफ्नो भन्ने चिनो केही छैन । धेरै नखरा नपार । नत्र तिम्रा तिघ्राका मासु झारीदिन्छु । वर्षभरि नेपालीपन, पहिचान केही छैन । वर्षमा एकदिन २/४ घण्टा टोपी लाइटोपल्नेले गर्छौ संस्कृतिको संरक्षण...
ए उमा, अहिलेसम्म बाख्रा खोरमै रैछन् । उमेशेले अलिकति डालेघाँस काट् भनेको पनि टेरेन हैन ? अब देख्छौ तिम्रा टोपी दिवस । खुरुक्क आआफ्ना काममा लाग । घाँसको भारी नबिसाइकन उमेशकी आमा भटभटाउन थालिन् । किस्ने लुसुक्क उकालो लाग्यो । उमा र उमेश आआफ्ना कामतिर लागे । अस्तु!